Akhristaha Mantano. Akhristaha weyn ee buugaagta iyo pdf. | Androidsis
Zack | | Codsiyada Android, Tafatirka PDF, Noticias
Suuqa waxaan ka helnaa codsiyo badan oo sameeya dukumiintiga iyo buugaagta akhristayaasha, laakiin kan ugu fiican uguna dhameystiran shaki kuma jiro: Akhristaha Mantano.
Mantano Reader waa mid aad u awood badan free PDF akhristaha dukumiintiyada iyo buugaagta keena fursado iyo koronto badan:
Kordhi oo kor u qaad oo yaree qalabka ku habboon shaashadda.
Waxay kuu ogolaaneysaa inaad maamusho feylasha adoo ku xiraya username iyo password si aad u ilaaliso feylasha.
Qoraal ugu dir hadalka, ka akhri hal bog illaa feyl dhan.
Qoraal ama qoraal garaaf ah.
Waxay u oggolaaneysaa in la dhigo faallo, calaamado iyo hoosta qoraalka.
Kuu ogolaanayaa inaad ka raadsato macluumaad ama ereyo qaamuusyada ama bogga (Google, Wikipedia, iwm). Qaamuusyadu waxay noqon karaan kuwo toos ah ama la soo dejisan karo si had iyo jeer loo heli karo.
Habka habeenka, si wanaagsan loogu akhriyo iftiinka hoose.
Fursado iyo koronto badan oo dheeri ah.
Shaki kuma jiro akhriste dukumintiga inaan ka helay waxa ugu fiican Suuqa. Sidoo kale, haddii aad tahay arday ama aad jeceshahay akhriska, shaki la’aan waxaad arki doontaa xulashooyinka uu codsigan u keeno inay faa'iido badan leeyihiin, oo lagu daray waxay akhrinaysaa qaabab badan (oo ay ku jiraan epub).
Waxaa jira laba nooc, mid bilaash ah oo xayeysiin ah iyo mid la bixiyay (€ 3,99).
Bookari Ebook-kaaga ah Premium
Iskuday oo noo sheeg sida aad u malaynayso codsigan ;-).
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Tafatirka PDF » Akhristaha Mantano. Akhristaha weyn ee buugaagta iyo pdf.
Codsi aad u fiican ayaa ah inaad ku aqriso buugaagta qolka
Sideen uga dhigi karaa inuu kor u akhriyo? Waan fahamsanahay inay iyaduna leedahay shaqadaas.
Waxaan rakibey nooca bilaashka ah sifiican ayeyna u shaqeysaa. Ma jiraa qof og sababta aysan ugu shaqeynayn horyaalada ??? Waxaan aqrinayaa buug cagtiisa ay ku qoran tahay nasiib darona aniga ima hogaaminayso qoraalka, waxaan kula tijaabiyay akhristayaasha kale xiriiriyaashuna halkaas way ka shaqeeyaan.
Qofbaa wax ka og arintaas ???
Sideed ugu dirtaa buug maktabad boostada?
Immisa buugaag ah ayey haysaa?